Yikuphi laptop kufanele sithenga ingane yethu? - Izindaba Rule
Yikuphi laptop kufanele sithenga ingane yethu?
Lesi sihloko osesikhundleni “Yikuphi laptop kufanele sithenga ingane yethu?” lalotshwa Jack Schofield, ngoba theguardian.com ngoLwesine 5 November 2015 09.31 UTC
Thina ucabanga ukuthola indodana yethu nencwajana yokubhalela noma laptop lokuzalwa kwakhe lesishiyagalolunye. Usuke ezodinga software efana Word, PowerPoint ne-Excel, futhi isikhathi angase singene internet esephepheni. Ngicabanga ke ukuthi kungaba umqondo omuhle uma ayengahluleka ziboshelwa kuso ngakho ungasebenzisa i-mouse ehlukile futhi ikhibhodi.
Sifuna ukuqinisekisa kuthatha naye isikhashana, kodwa asinakukwazi ukuba uchithe imali eningi. Kerry
Ngokwazi ngikwazi ukusho ngihambele lwaminyaka yonke oluya UMBHEDE (elaliyikomkhulu British Educational Training and Technology Show), tikolo manje zisebenzisa umthengi-grade Android / Apple amaphilisi kanye Windows laptops. Nokho, UMBHEDE 2015 wabonisa Umkhuba towards Windows 2-in-1 "detachables", okuyikhona Ngingathanda batusa.
A detachable (Ngenza lokho) kuyinto Windows Convertible lapho tablet touch-screen plugs ukuhlukana ikhibhodi. Izibonelo eyaziwa Well zihlanganisa Asus T100TAF futhi bonke Surfaces Microsoft. Ukusebenza Dual kusho izikole akudingeki ukuba uthenge amaphilisi ezihlukene futhi laptops, ngenkathi Windows App Studio kwenza kube lula othisha ukwakha Windows elula 10 Izinhlelo zokusebenza ngaphandle esephepheni.
Isixhumanisi ezibuthakathaka laptops iyona lomnyango, futhi abantu angase agcizelele lomnyango by nokuphakamisa laptop abo by the screen. Umqondo Bad. In detachables, the izikrini ngokuvamile kuvikelwe odonsa eqinile, futhi izinkintsho bheka zintekenteke ingasaphathwa. Ngempela, abanye detachable Awunawo izinkintsho - isib Lenovo Miix 3 futhi esasizofika ngokushesha Dell XPS 12 - Kodwa awukwazi ukushintsha kalula engela kwesikrini.
Ngakho Ngizobe alindele detachable isikhathi eside esingaphezu laptop zendabuko, noma Convertible nge lomnyango 360-degree.
Windows 10 akanawo abaningi zokusebenza tablet Android, noma ikhwalithi Apple iPad zokusebenza, kodwa ezindaweni eziningi zihlanganiswe, futhi uku ngokuyisisekelo ibhonasi khulula. Uma ingekho lwe-Windows, ungasasebenzisa gcwele andla (kangcono ukwedlula tablet-quality) Iziphequluli web kanye nezigidi ukugijima izinhlelo bendabuko Windows. Futhi, kunjalo, zikhona izindlela eziningana ukugijima Android zokusebenza on Windows PC, njenge BlueStacks futhi AmiDuOS.
Aphathekayo for kids
The laptop entry level for kids iyona Stream HP 11. Lokhu ngempela ngamandla for wentengo low (£ 169,97 kuya £ 199,99), kodwa akanawo screen touch, nesihenqo akuyona detachable.
Izinyanga ezimbalwa ezedlule, the red HP inkundla X2 10-n055na bekulokhu Pick lami detachables at £ 249,99. It uzizwa okuqinile ngaphezu the Asus T100TAF elidala, has a ikhibhodi kangcono, futhi a screen ehloniphekile. Nokho, Asus usethule nje T100HA, okuyinto kuthuthukisa on the X2 inkundla 10, Nokho ikhibhodi kuyinto mncane.
I Asus T100HA ingenye laptops lokuqala okudayisa athumele Windows 10 ezifakwe, futhi Windows 8.1 imishini sezenziwa kusulwe ezitolo. PC World, ngokwesibonelo, ithengisa HP inkundla X2 10 Windows 8.1 ngoba £ 199,97, ngakho mina ngeke umangale uma Windows 10 inguqulo okubonakala ngokushesha.
Ngiye ngaphambilini ababechuma basishaya indiva Acer Switch 10 futhi 11 ngoba zibiza ngaphezulu - ngokuvamile £ 300 kuya £ 350 - kodwa Shintsha 10E kungase kube kuwufanele look at £ 229,95. Ngiye futhi indiva Toshiba Satellite Chofoza Mini, ngoba ngicabanga screen 8.9in kuyinto encane kakhulu. Kodwa uma setting Windows ukukhulisa uya okusezingeni ngokwanele, mhlawumbe akunjalo encane kakhulu ingane. Ungase ukwazi ukuqhathanisa zombili lezi imishini i Asus T100HA esitolo John Lewis, noJohane Lewis kuhlanganisa isiqinisekiso iminyaka emibili-.
Zonke lezi entry level ezimbili-in-abanhliziyo babe izilimi futhi 2GB of inkumbulo main Atom-based, nge 32GB eMMC Flash imemori chip ukunikeza isitoreji. They kusobala ukuthi ngeke kufaneleke kangcono 4GB inkumbulo 64GB wesitoreji, kodwa imishini enjalo kunzima ukuthola, futhi kubiza ngaphezulu. I esisheshayo iwukuba engeza i 32GB extra ukugcinwa noma ngaphezulu ekhadini microSD. Uma uthenga ezimbili-in-one with Windows 8.1 futhi thuthukisa it Windows 10, engeza ikhadi lokuqala: ongomunye wemishini 32GB mina upgraded akazange isikhala esanele ukuze uqede ukufakwa.
Ngithathe enomuzwa wokuthi £ 250 kunazo uyofuna ukuchitha on laptop for ingane. Uma ufuna ukuchitha kancane, funa Imi-price Lenovo Miix 3. Ezinyangeni ezintathu ezedlule, Ngathenga esisha £ 150, kodwa namuhla Ngingathanda ukuthola £ 250 Asus T100HA esikhundleni.
Laptops Iningi izosebenza nge "universal" iThulibha Yongeno Olusheshayo, ezifana Plugable UD-3900, kodwa angicabangi udinga eyodwa. Laptops Iningi ngeke akuvumele uxhume i USB yangaphandle noma Bluetooth ikhibhodi ngaphandle kokusebenzisa isiteshi docking. Kukhona inala keyboard colorful elakhelwe izingane, futhi eziningi ukuthayipha tutorials.
Nokho, the Asus T100HA has a new USB Uhlobo C port, kanjalo kuyodingeka adaptha encane.
I lokucabanga uhlela ukuba kube nomphathi system for laptop indodana yakho, futhi amnike kokwakhe i-akhawunti yengane. Lokhu kukuvumela ukuba uhlele sikhatsi lesitsite, ukuvimba website akwemukeleki, setha yobudala izilinganiso imidlalo, futhi ucacise imali malini (uma ikhona) yena angakwazi ukuchitha online. Ungakwazi ukulawula lezi izilungiselelo ukude account.microsoft.com/family.
Windows 8.1 futhi 10 ngeke irekhodi masonto onke imisebenzi indodana yakho i-imeyili: bangaki amahora isetshenziswa PC yakhe, namawebhusayithi uye wavakashela, futhi isikhathi eside kangakanani ayihlala zokusebenza akuthandayo. Akudingeki ukuba usebenzise le sevisi - kuba ozikhethela - kodwa ivulwa ngokuzenzakalelayo.
Zikhona izindlela commercial ezifana Ideskithophu Magic, kodwa lokho for kids abasebasha ngempela.
Kufanele ungene kwi laptop ngezikhathi, usebenzisa i-akhawunti yakho administrator, ukuhlola ukuthi konke kuhamba. Akhawunti Child kukhona pretty silondekile, futhi Windows 10 olusha ngokuzenzakalelayo, kodwa kuwumbono omuhle ukuba unake izinto, futhi ugijime extra anti-virus amasheke.
Khuthaza indodana yakho ukuba ugcine imibhalo, izithombe kanye nezinye amafayela ukukhulula isitoreji akhawunti yakhe Microsoft OneDrive online, kanye / noma i-SD yememori khadi. Ungakwazi okwesikhashana ukushintshela ikhadi PC yakho siqu ukuze ngakho futhi ukwengeza izithombe, ozithandayo amafayela omculo, amavidiyo YouTube nokunye okuqukethwe.
Kukhona izinguqulo free izinhlelo Microsoft Office in OneDrive, futhi ungakwazi ukufaka ezinye izinhlelo zokusebenza njengengenalo Isitolo se-Windows. Angicabangi ukuthi kuwufanele ukuthenga noma ukufaka izinhlelo okugcwele kwe-Desktop ukuthi wayeneminyaka engu-9 ubudala, ngaphandle kokuthi ubhalisele Office 365 Home. Lokhu kunikeza Office suite umnyuziki abantu abahlanu on PC, Macs, amaphilisi kanye Smartphones, plus a itherabhayithi isitoreji for umsebenzisi ngamunye, ngoba £ 79,99 unyaka. Kungenjalo, LibreOffice kuyinto ehlukile khulula.
Ungase futhi pre-ufake Minecraft njengoba uhlelo noma i lokusebenza, the Scratch izinhlelo imvelo - abe look at Uma usuqala nge Scratch kuqala - and Khan Academy. Ungakwazi ungivumele lezi kanye nezinye izinhlelo the taskbar, noma abeke icons kwideskithophu, ukuze kube lula ukuthola.
34565	1 Isigaba, Buza Jack, Computing, Izici, Jack Schofield, Aphathekayo
← Apple Ukubuyekeza TV (2015) [VIDEO] Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa Yakho zikuphuca Blind, Fight Back! →